DAGAAL DHEX MARAY MAXAMED DHEERE IYO JILIBKA MAXAMED MUUSE
ISHA WARKA: www.middle-east-online.com | March 4, 2003
Warar ay faafisay warbaahinta bariga dhere ayaa sheegay in dagaal ka dhacay Gobolka Shabeelada Dhexe ee Soomaaliya, dagaalkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof waxaa lagu soo waramay in uu la xiriirey ama la iskaga horyimid dhul, dagaalkaas oo dhacay Isniintii.
Dadka dhintay ayaa la sheegay in ay yihiin dhanka Jilibka Maxamed Muuse iyo laba shicib ah, shanta kalena ay yihiin maleeysiyada taageerta Xabeeb. In kale oo aan la magcaabin ayaa dhaawacmay.
Warku waxa uu intaas ku daray in dagaalkan oo ka dhacay tuulada Raghe-Eele uu ka bilaabmay kaddib markii maleesiyada taageerta Maxamed Cumar Xabeeb (oo loo yaqaan Maxamed Dheere) ay weerar ku qaaday goob isbaaro ah oo ay lahaayeen jilibka Maxamed Muuse.
Dagaalkan waxa uu dhacay kadib markii uu weerar soo qaaday Xabeeb oo raba in uu ballaariyo xukunka sharci darada ah ee uu ku hayso aagaas, sidaas waxaa yiri Axmadey Sheikh Xassan oo ka tirsan jilibka Maxamed Muuse.
Wararku waxay ku dareen in dagaalkaas ay xaqiijiyeen ilo wargal ah oo aagaas jooga, laakiin uu Xabeeb beeniyey arintaas.
Xabeeb oo ku magac dheer Maxamed Dheere waxa uu xukumaa caasimada Gobolka SHabeelada Dhexe ee Jawhar, halkaas oo uu gacanta ku hayey ilaa sannadki 2001 markaas oo uu kasoo baxay DKG.
Soomaaliya waa dal aan lahayn dawlad dhexe oo sugta ammaanka dadka isla markaana muctarif dunida ka ah caalamka ilaa uu ka baxay Maxamed Siyaad Barre sannadkii 1991 ayaa warku kusoo gabagabeeyey.
[Balse u fiirso akhristow dhammaan dadkaas dhintay iyo dhaawacuba waa dad wada dhashay, taase warku kuma darin, waana mida ay rabaan qabqablayaashu in aan dadka la fahamsiin si dagaalku uusan weligiis u dhammaan, eeg hada qabiil soo dhaaf, jilib ayuu marayaa lamana oga wax jilib ka hooseeya. Ogowna inta Soomaalidu isku maqan yihiin waxaa sidii ladoono laga yeelaa kheyradkii dabiiciga ahaa ee dalka sida xeebaha, kalluunka iwm, khayraadkii beerahana waxaa lagu bedeley dhul lagu beero daroogo, inta soo haartayna waxaa loo soo dhoofiyaa in lagu aaso sun raadka dagaalka ka daran ku reebi doonta jiilasha hadda iyo kuwa soo socda ee dhulkaas ku noolaan doona.... waxaanse akhristow la ageyn xisaabtanka uu xusay Kofi Annaan toddobaadkii hore waqtiga la hirgelin doono, si ugu yaraan loo daba qabto dalkan, ileyn caano qubtay hamadoodaa la qabtaaye... waxaase taas ka daran goorma ayaa shacabka Soomaaliyeed ka hari doonaan taageerada qabqablayaasha dagaalka....]
Tarjumadii SomaliTalk Canada | 5/3/2003
LIFAAQ: Dhulka lagu dagaalamayo oo ayadoo aan cidna u warhayn ama dan kalahayn lagu duugayo sunta halista ah ka akhri halkan... GUJI